ထိုင်းနိုင် ငံ ဖူးခက်မြို့ အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုတွင် စင်ကာပူနိုင် ငံသူတစ်ဦး၏ခင်ပွန်း အသတ်ခံရ - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင် ငံ ဖူးခက်မြို့ အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုတွင် စင်ကာပူနိုင် ငံသူတစ်ဦး၏ခင်ပွန်း အသတ်ခံရ
ဖူးခက်၊ ဩဂုတ် ၂၃
စင်ကာပူနိုင်ငံသူတစ်ဦး၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အသက်(၅၄)နှစ် အရွယ် ဗြိတိန်လူမျိုးတစ်ဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်မြို့ ကာရွန်အ ပန်းဖြေစခန်းဧည့်ရိပ်သာတစ်ခု၌ အသတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု ကာရွန်ရဲ အဖွဲ့မှ ရဲမှူး တီချင်းဒီသွန်ဂွန်းက ဩဂုတ် ၂၃ ရက်က သတင်းထုတ် ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ゞင်းသည် ဇနီးနှင့်သားဖြစ် သူတို့နှင့်အတူ ဖူးခက်သို့ အပန်း ဖြေလာရောက်ရင်း နော်ဝေလူမျိုး မိတ်ဆွေဖြစ်သူ အသက် (၅၄)နှစ်ရှိ ရော်ဂျာဘူးလ်မန်းနှင့်အတူ ဧည့်ဆောင်တစ်ဆောင်တည်းတွင် တည်းခိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
]]သူတို့ဟာ အခန်းချင်းကပ် နေကြပါတယ်။ ယင်းနေ့နံနက် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီထိ ဝရန်တာသို့ထွက် ပြီး သီချင်းများအတူဆိုနေရင်းက နှစ်ဦးသားစကားများခဲ့ကြတယ်}}ဟု ရဲအဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်သည်။ နှစ်ဦးသား ရန်ဖြစ်ရာမှ နပန်းလုံး သတ်ပုတ်ခဲ့ကြကြောင်း မျက်မြင် ဖြစ်သူ ဇနီးနှင့်သားတို့က ရဲထံထွက် ဆိုခဲ့ကြသည်ဟု ရဲမှူးဖြစ်သူက ဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ထို့နောက် နော်ဝေလူမျိုးဖြစ်သူ သည် အခန်းသစ်သားတံခါးအား ခြေဖြင့်ဆောင့်ကန်ကာ ထွက်ပြေး သွားခဲ့သည်ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်သည်။
“အခန်းဖော်နော်ဝေလူမျိုး အား စစ်ဆေးရာမှာ သတ်ရန် မရည်ရွယ်ဘဲ လက်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်တယ်}}ဟု ရဲထံအစစ်ခံထွက် ဆိုခဲ့သည်။ “သူ့ကို အခုတော့ ချုပ်ထား ပါတယ်။ အာမခံပေးမပေးကတော့ တရားသူကြီးက ဆုံးဖြတ်မှာပါ}} ဟုလည်း ဆက်လက်ပြောကြား လိုက်သည်။ အမှုအား ဖူးခက်တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆို တင်ပို့ထားပြီး အသတ် ခံရသူ၏ အမည်ကိုမူ ရဲအဖွဲ့က ထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ချေ။
မြဝတီ-ဘားအံလမ်း ကျုံဒိုးမြို့အနီး၌ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် နေ့ချင်းသွားလာရသောခရီးမှာ ညအိပ်သွားလာနေကြရ
အမေရိကန်၏ အရှည်ဆုံးစစ်ပွဲပြီးဆုံးရန် အမေရိကန်နှင့် တာလီဘန်တို့ ဆွေးနွေးပွဲပြန်လည်စတင်
(၂၇)ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဆုများရရှိထားသော ဥရောပရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၁၇ ကား ပြသမ?
အစ္စရေးနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ နေတန်ယာဟုပါတီ အနိုင်ရ
နောက်ဘီးပေါက်သော ယာဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးတွင် ကာရံထားသော ဂတ်စ်ဝေး တန်းများအား ဝင်??
လက်ရွေးစင်အသင်း နည်းပြချုပ်သစ် လက်ထက်တွင် ပထမဆုံး ခြေစမ်းပွဲအဖြစ် တရုတ်လက်ရွေးစင် အသင်းနှ
မန်းသင်္ကြန်ပွဲတော်၌ ဈေးရောင်းချခွင့် မရှိသော ကျုံးအနီးဝန်းကျင် လမ်းများကို ထုတ်ပြန်၊ လိုက